Network နင့်ပတ်သက်သော ebookများ - Page3- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Network နင့်ပတ်သက်သော ebookများ
ပို့စ် 21 ခုအတွက် 72 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Network နင့်ပတ်သက်သော ebookများ
Networkflash file ကိုထပ်မံပေးပို့ဝေမျှအပ်ပါသည်.လိုအပ်ချက်များရှိရင်လည်း ပြင်ဆင်ဝေမျှပေးပါ.
အောက်ပါအသင်းဝင် 10 ဦးတို့မှ TunMinnOo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စစ်တွေသားချေ, ဖယောင်း, aungzaw, bonge, chitnyimalay, lazyguylay, Lwin Thu, phyomyintthein, spaceboy, theinzaw5949
Find More Posts by TunMinnOo
zshare,mediafire နဲ့ rapidshare တွေက ဒေါင်းမရ တာများတယ်။ ifle က အဆင်ပြေဆုံးပဲ။ ဒီမှာတင်ထားတဲ့လင့်ခ် အတော်များများကလဲ သေနေပြီ။ အားရင် ကိုစောတို့ မတုတို့ပြန်ကြည့်ပေးကြပါဦး။
ပို့စ် 89 ခုအတွက် 266 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by Mon Aung
ဘယ်လင့်ခ်ကိုပြောတာပါလဲ။ zshare,mediafire နဲ့ rapidshare တွေက ဒေါင်းမရရင် ifle ကတင်ပေးပါမယ်။ ဘယ်လင့်ခ်ကို ဒေါင်းချင်တာလဲဆိုတာတော့ ပြောဦးမှပေါ့။
Moe Lay ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Moe Lay
ကိုမိုးလေးပြောတာ မှန်ပါတယ် ကိုမွန်အောင် ဒေါင်းလို့မရတဲ့
ယူလို့မရရင် ဖိုရမ်မှ ညီအစ်ကိုမောင်နှတွေဆီကနေ အကူညီတောင်းလို့
ရပါတယ်ဗျာ ဆမိုင်းလေးတို့လည်းတတ်နှိုင်သလောက်ကူညီပါ့မယ် ဒေါင်းရ
တာအဆင်ပြေတဲ့လင့်ခ်တွေကတော့ ifile.it နဲ့ mediafire.com က
23-09-2009, 12:28 PM
ပို့စ် 94 ခုအတွက် 331 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Network အကြောင်းရေးထားတဲ့ မြန်မာစာအုပ်ကလေးပါ အတော်ကောင်းပါတယ် ...
အကိုရေ no such file ဆိုပြီးဖြစ်နေလို့ပါ...အကိုအားရင် ပြန်တင်ပေးပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ကျော်ထက်ချိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ကျော်ထက်ချိန်
23-09-2009, 05:17 PM
ပို့စ် 113 ခုအတွက် 853 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့စာအုပ်လေးပါ...တူမလားတော့မသိဘူး....ဆရာဇော်လင်း ရေးတာပါ...အောက်မှာ ယူပါဗျာ...
Last edited by မင်းသီဟထွန်း; 25-09-2009 at 04:12 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မင်းသီဟထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကျော်ထက်ချိန်, lazyguylay, runner.zaw, sawma.lm
Find More Posts by မင်းသီဟထွန်း
23-09-2009, 10:05 PM
ပို့စ် 10 ခုအတွက် 23 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by မင်းသီဟထွန်း
အစ်ကို တင်ပေးတဲ့ စာအုပ်အတွက်ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ.. ဖိုင်ဆိုဒ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ 187 mb တောင်ဆိုတော့ အစ်ကိုရေ ဆရာဦးဇော်လင်းရေးတဲ့ ဘယ်စာအုပ်ကိုပြောတာလဲဟင်.. စာအုပ်နာမည်လေးပါတလက်စ တည်းဖော်ပြပေးပါလားဗျာ.. ရှိပြီးသားဆိုရင် ဒေါင်းစရာမလိုဘူးပေါ့... မရှိသေးရင်တော့ ကြိုးစားပြီးဒေါင်းဦးမှာ ...
Find More Posts by lazyguylay
24-09-2009, 02:33 PM
ကိုlazyguylay ခင်ဗျာ....စာအုပ်နာမည်ကတော့ "ကွန်ပျူတာ ကွန်ယက်အကြောင်း လေ့လာမူလမ်းညွန်" "COMPUTER NETWORK STUDY GUIDE WITH MICROSOFT WINDOWS NT 4.0"
Last edited by မိုးလွင်; 24-09-2009 at 02:34 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မိုးလွင် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မင်းသီဟထွန်း, bonge, lazyguylay, minthike
စာအုပ်တွေကအဖိုးတန်တွေကြီးပဲ။ ခုမှရောက်တာနောက်ကျနေတယ်နော်။တင်ပေးသူအားလုံးနဲ့ လမ်းညွန်ပေးသူများကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်နော်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ချစ်စရာကောင်းသူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ချစ်စရာကောင်းသူ
ပို့စ် 359 ခုအတွက် 2,082 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ပူတူး
fundalmentals of wimax understanding broadband wireless
password : www.myanmarfamily.org
၀ိုင်မက်စ့် နက်ဝေါ့နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်လေးပါ ...
ဒီကနေ့ကျနော်ဖြစ်နေသမျှ နောက်တနေ့ ကျနော်စဉ်းစားမျော်မှန်းနိုင်သမျှအားလုံးဟာ အမေ့ရဲ့ကျေးဇူးတွေချည်းပဲဖြစ်တယ် (လင်ကွန်း)
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ moe_poung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by moe_poung
bonge, lazyguylay, minthike, moe_poung
ပို့စ် 156 ခုအတွက် 390 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Red Hat Linux Networking and System Administration
Originally Posted by ရာမညဖိုးလပြည့်
File Expired !တဲ
70 မပြည့်လို့တင်မရဘူးပြောနေလို့ ဖြည့်လိုက်တာပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ခင်မောင်ထွန်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
lazyguylay, minthike, moe_poung
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတာလေး ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် 2nd edition တော့ မဟုတ်ပါဘူး...အဆင်မပြေရင်ပြောပါခင်ဗျာ.. ကျွန်တော် 2nd edition ကိုရှာပြီး ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်
Download link : ifile
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ ကျော်ထက်ချိန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ခင်မောင်ထွန်း, lazyguylay, minthike, tu tu
12-11-2009, 02:20 PM
Originally Posted by TunMinnOo
သူလည်းအတူတူပဲ file expired ! တဲ့
လုပ်ကြပါဦးဗျာ။ လင့်တွေကကြာပြီထင်တယ်။ ကူကျပါဦး
ကိုထွန်းမင်းဦး တင်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေ အကုန်လုံး expire ဖြစ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ....
ပြန်စစ်ပေးကြပါအုံး အကိုတို့ အမတို့ရေ......
[COLOR="Blue"][COLOR="Red"]" လုံ့လ၀ီရိယ "[/COLOR] သည် ကံကောင်းခြင်း၏ [COLOR="Red"]" မိခင် "[/COLOR] ဖြစ်သည်[/COLOR]
31-08-2010, 07:29 AM
ဦးမျိုးသူရ ရေးတဲ့ နေ့စဉ်သုံးအင်တာနက်စာအုပ်လေးပါ။
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ အောင်စည်သူ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, ဇေယျာအေး, မောင်ပေါ်ဦး, bonge, moe_poung
24-10-2010, 12:31 PM
ပို့စ် 96 ခုအတွက် 243 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - Network Technology စာအုပ်ပါ
Find More Posts by lifemark
Network အကြောင်း စအုပ်လေးပါ
ဒီစာအုပ်လေးကို ကျနော်ဘယ်သူ့ ဆီက
ရလာမှန်းမမှတ်မိတော့လို့ မူရင်းဖြန့်ဝေသူ ကို ဦးစွာတောင်းပန်ပါတယ်
ခင်ဗျာ ဒီစာအုပ်လေးမှာ network နဲ့ပတ်သက်တဲ့
လွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျနော် network
မချိတ်တက်သေးခင်က ခံစားခဲ့ရတဲ့ ခံစားမှုမျိုးနဲ့
သူ ငယ်ချင်းများကင်းဝေးပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ကဲ သူငယ်ချင်းများ လိုရင် အောက်မှာ ဆွဲလိုက်ဗျာ .
Last edited by thureinsoe; 13-12-2010 at 06:17 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, မိုးလွင်, bonge, creative2020202020, lazyguylay, minthike, ninimar, sky4ster, Ye Aung
13-12-2010, 06:18 PM
ပြန်စာ - Network အကြောင်း စအုပ်လေးပါ
ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့ ပြုလုပ်ပုံများကို
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ thureinsoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သားငယ်လေး, မိုးလွင်, bonge, lazyguylay, minthike, moe_poung, ninimar, pannuko, sky4ster, Ye Aung, zo
22-12-2010, 10:47 PM
ပို့စ်7ခုအတွက် 22 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကို Tun Min Oo တင်ထားတဲ့ ပိုစ်က အကုန်လင့်လေးတွေ သေသွားလို့ဗျာ...နဲနဲ ရထားတဲ့ အကို အမများ ပြန်တင်ပေးကြပါအုန်း....ကျွန်တော့် စက် ပျက်သွားလို့ စာအုပ်တွေ ပြန်လိုက်စုနေရလို့ပါ ...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဂတုံးလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဂတုံးလေး
23-12-2010, 06:19 AM
ပို့စ် 19 ခုအတွက် 126 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပူတူး ဂျစ်တူး ရာမညဖိုးလပြည့်တင်ထားသော link တွေကိုစာမျက်နှာ၁မှာ download လုပ်လို့မရပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် link ကို up to date လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Last edited by ninimar; 23-12-2010 at 06:34 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ninimar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ninimar
23-12-2010, 12:45 PM
ပို့စ် 63 ခုအတွက် 238 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by ninimar
ကိုဖိုးလပြည့်တင်ထားတာက ဘယ်လိုဟာလဲတော့ ကျွန်တော်မသိဘူးဗျ .. ကျွန်တော်မယူလိုက်ရဘူး ..powerpoint နဲ့ TCP / IP ကို ရှင်းပြထားတာဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့်မှာ ရှိတာလေး တင်ပေးထားပါတယ် .. လိုချင်ရင် အောက်မှာပဲ ဒေါင်းလိုက်ပါ .. စာမျက်နှာ ၁ မှာတော့ update လုပ်လို့ရ၀ူး .. တားမှာ အဲ့လို ပါဝါ တွေ ရှိဝူး .. အဟီး .. အဆင်ပြေပါစေဗျာ ...
>>>TCP / IP <<<
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ psycho အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, lazyguylay, tu tu, Ye Aung
30-12-2010, 06:50 PM
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 21 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Network EBook လေးတွေ လက်ဆောင်ပေး လိုက် ပါတယ်။
For Dummies Networking All-in-One
ကိုအာကာထွဋ္ဋ်တင်ပေးတဲ့ဆိုဒ်တွေက အားလုံးသေနေတယ်ဗျ....... ဖြစ်နိုင်ရင်တစ်ခြား လင့်ခ် ကနေ ပြောင်းတင်းပေးပါလား.......
ဒါမှမဟုတ် lovecreator.min@gmail.com ကိုပို့ပေးပါလား.....
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ မင်းဆွေအိမွန် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
သန့်ဇင်ဌေး, နေမင်းမောင်, lazyguylay, minthike, moe_poung, zo
Find More Posts by မင်းဆွေအိမွန်
31-12-2010, 09:49 AM
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, နေမင်းမောင်, bonge, lazyguylay, Lwin Thu, minthike, moe_poung, zo
ပို့စ် 27 ခုအတွက် 81 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ပြန်စာ - ကွန်ပျူတာမှ ကွန်ယက်ဆီသို့(မျိုး
IP Addressing / TCP / Sub Net Mask အကြောင်း မြန်မာ လို စာအုပ်လေး
ရှိရင် တင်ပေးပါ အုံးနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ Infomation Answer အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Infomation Answer ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Infomation Answer
ပို့စ် 49 ခုအတွက် 220 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်က ccna အကြောင်းလေ့လာချင်လို့ပါ
ဆရာဇော်လင်းရေးတဲ့ road to ccna ကို ရှိလို့ရှိရင် ကျေးဇူးပြုပြီးမျှပေးကြပါခင်ဗျ
Lwin Thu ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by Lwin Thu
24-01-2012, 02:20 PM
Nation Web Potal -Burmese
ရထားတာတော်တော်လေးကြာပြီဗျ။ 1.1.2012 ရက်နေကတော့ Gtalk မှာရှိတယ်သူငယ်ချင်းတွေကိုမေးလ်ကနေ ဒီလိုလေး မျှဖြစ်တယ်။
ကို ဇော်သူရိန် (MyanmarITmen.org) လည်းခုလက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ကိုးကားပြီးဆောင်းပါးရေးထားပါသေတယ်။(ဒီနေရာမှာ)
E-book >> [ Download ]
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ မျိုးဟန်ထက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်ပေါ်ဦး, azp09, Lwin Thu, zo
ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ Network နဲ့ ပက်သက်တဲ့ စာအုပ်လေးတွေတင်ပေးသွားပါမယ်ဗျာ...........
အောက်ပါအသင်းဝင်6ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မျိုးဟန်ထက်, မြန်အောင်သား, bagothar85, Lwin Thu, putty, zo
22-02-2012, 11:36 AM
Wireless Technologies - Circuits, Systems and Devices
All Passwaord = WWW.Myanmarfamily.Org
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
$ညိုမင်းလွင်$, မျိုးဟန်ထက်, bagothar85, Lwin Thu, zo
23-02-2012, 11:45 AM
Wiley Data Modeling Fundamentals Jul 2007
ALL Password = WWW.Myanmarfamily.Org
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
mm computer ebooks, networking ebooks
Linux Ebooks Ye Naung E-Books & Tutorials 41 18-02-2012 03:32 PM
Quickly Open Network Connections List in Windows Vista phoelapyaee Network ပိုင်းဆိုင်ရာ 1 26-10-2008 11:14 AM
ဖိုရမ်၏ ပင်မအချိန်သည် ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် +6.5 ဖြစ်သည်။ဒေသစံတော်ချိန် 02:08 AM